Returns & Refund, Inqubomgomo Yokulethwa
Abahlinzeki kungenzeka (ikakhulukazi ama-oda wangokwezifiso) badinga isikhathi esengeziwe sokulungiswa ngaphambi kokuthumela kwento. Amakhasimende azokwaziswa ngalezi zimo. Izikhathi zokucubungula ezimaphakathi kusuka kubahlinzeki ziba phakathi kwezinsuku ezi-1 kuye kwezingu-10. Ngokuya endaweni okuyi-US noma i-International, sicela uvumele phakathi kwezinsuku ezi-1 kuye kwezingamashumi amathathu ukuze i-oda lakho lifike. Ama-oda womkhiqizo ngaphakathi e-US anezinhlaka ezisheshayo zesikhathi.
Inqubomgomo ihlala izinsuku ezingama-30 ukusuka kokuthola i-oda lakho. Ama-oda angaphandle kwalesosikhathi awakwazi ukubuyiselwa imali noma ukushintshwa. Izinto ezibuyayo kumele zisetshenziswe futhi zibe sesimweni sangempela ngokuhlanganiswa kwangempela. Ukukhululwa ekubuyiseleni: Izimpahla ezingabonakala njengokudla, izimbali, amaphephandaba noma omagazini azibuyiswa.
Futhi asemukeli imikhiqizo esezintweni zasendlini noma zangasese, izinto eziyingozi, noma uketshezi oluvuthayo noma amagesi. Izinto ezingeke zibuyiswe: Amakhadi esipho Imikhiqizo yesoftware efakiwe Ezinye izinto zokunakekelwa kwempilo nezomuntu siqu Ukuze uqedele ukubuyisa, sidinga irisidi noma ubufakazi bokuthenga. Uyacelwa ukuthi ungathumeli ukuthenga kwakho kumenzi. Kunezimo ezithile lapho kunikezwa kuphela ukubuyiselwa kwemali okuyingxenye (uma kusebenza) Incwadi enezimpawu ezisobala zokusebenzisa i-CD, iDVD, ithebhu le-VHS, isoftware, umdlalo wevidiyo, ikhasethi lekhasethi, noma irekhodi le-vinyl elivuliwe Noma iyiphi into engekho esimweni sayo sokuqala, ilimele noma ilahlekile izingxenye zezizathu hhayi ngenxa yephutha lethu Noma iyiphi into ebuyiselwa ngaphezu kwezinsuku ezingama-30 ngemuva kokubuyiselwa kwemali (uma kusebenza)
Lapho ukubuyiswa kwakho sekutholakele futhi kwahlolwa, sizokuthumela i-imeyili ukukwazisa ukuthi siyitholile into yakho ebuyisiwe. Sizokwazisa futhi ngokugunyazwa noma ukwenqatshwa kwemali yakho ebuyiswayo. Uma uvunyelwe, kuzobuyiselwa imali yakho, bese kufakwa isikweletu ngokuzenzakalela ekhadini lakho lesikweletu noma endleleni yokukhokha yangempela, kungakapheli isikhathi esithile sezinsuku. Izimbuyiselo ezenziwa emuva kwesikhathi noma ezingekho (uma zikhona) Uma ungakayitholi imbuyiselo okwamanje, qala uhlole i-akhawunti yakho yasebhange futhi. Bese uthintane nenkampani yakho yekhadi lesikweletu, kungathatha isikhashana ngaphambi kokuthi ukubuyiselwa kwemali kwakho kuthunyelwe ngokusemthethweni. Okulandelayo thintana nebhange lakho. Kukaningi kuba nesikhathi sokucubungula ngaphambi kokuthi kubuyiselwe imali. Uma ukwenzile konke lokhu futhi ungakayitholi imbuyiselo yakho, sicela uxhumane nathi ku- [i-imeyili ivikelwe]
(uma kusebenza) Izinto ezinentengo ejwayelekile kuphela ezingabuyiselwa imali, ngeshwa izinto zokuthengisa azikwazi ukubuyiselwa imali. Ukuhwebelana (uma kusebenza) Sibeka kuphela izinto uma zingalungile noma zilimele. Uma udinga ukuyishintshanisa ngento efanayo, thumela i-imeyili ku- [i-imeyili ivikelwe] bese uthumela into yakho ku:
Uma into imakwe njengesipho lapho ithengwa futhi yathunyelwa ngqo kuwe, uzothola isikweletu sesipho ngenani lembuyiselo yakho. Lapho into ebuyiselwe isitholile, isitifiketi sezipho sizothunyelwa kuwe. Uma leyo nto ingazange imakwe njengesipho lapho ithengwa, noma opha izipho enze ukuba i-oda yathunyelwa kubo uqobo ukuze bayinike wena ngokuhamba kwesikhathi, sizothumela imbuyiselo kulowo opha izipho futhi uzokwazi ngokubuyisa kwakho. Ukuthumela Ukubuyisa umkhiqizo wakho, kufanele uthumele umkhiqizo wakho ku:
Uzoba nesibopho sokukhokhela izindleko zakho zokuthumela ngokubuyisa into yakho. Izindleko zokuthumela azibuyiselwa.
Uma uthola ukubuyiselwa kwemali, izindleko zokuthumela ngokuqinisekile zizodonswa kwimbuyiselo yakho. Kuya ngokuthi uhlala kuphi, isikhathi esingathatha isikhathi sokuthi umkhiqizo wakho otshintshanisiwe ukufinyelela kuwe, ungahluka. Izimali ezikhokhwa kabusha kungenzeka zisebenze ngokuya ngesimo se-oda ukuthi intwana iyakhanselwa noma ibuyiselwe imali. Uma uhambisa into engaphezu kwama- $ 75, kufanele ucabangele ukusebenzisa insiza yokuhambisa ngomkhondo noma ukuthenga umshuwalense wokuthumela. Asikuqinisekisi ukuthi sizoyithola into yakho ebuyisiwe.